Kooxda Al-shabaab oo sheegay in aysan baxsan ragii weeraray dhismaha westgate ee Nairobi – Radio Daljir
Kooxda Al-shabaab oo sheegay in aysan baxsan ragii weeraray dhismaha westgate ee Nairobi
Nofeembar 12, 2013 5:07 b 0
Baraawe, November 12, 2013 – Kooxda Al-shabaab ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in aysan baxsan kooxdii dablayda ahayd ee weerartay dhismaha Westgate mall ee Nairobi, halkaas oo dad badan lagu laayey bishii September ee ina dhaaftay.
Qoraal lagu daabacay bar ay internetka ku leeyihiin kooxda Al-shabaab, waxaa lagu sheegay in aysan baxsan raggii weeraray dhismaha, ururka ayaa ku faanay in raggaas ay howl-gal culus fuliyeen isla markaasna diyaar u yihiin ay kuwa kale ka fuliyaan Kenya.
Al-shabaab waxay sheegeen in ragga galay dhismaha westgate ay ka tirsanayeen guutadda is-miidaaminta ururka, ?Xasuuqa ayey geysteen iskumana deyin in ay baxsadaan.? Baa lagu yiri qoraalka Al-shabaab.
Kenya waxaa weli ka socda baaritaan la xiriira afar qof oo ka tirsan dadkii ay dileen ciidanka dalkaas ee howl-galka ku jiray, 4-ta qof ayaa loo badinayaa in ay ka tirsan yihiin kooxdii weerarka fulisay sida ay sheegtay Kenya.
Booliska aduunka ee Interpol ayaa ka caainaya Kenya xilligan xaqiijinta afarta ruux in ay ku jireen kooxda iyo in kale.
RW Saacid oo shaaciyey in uu jiro khilaaf siyaasaddeed oo u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha dalka
Puntland oo walaac ka qabta buundo muhiim u ahayd ganacsiga Boosaso iyo gobollada kale oo go?day